Ukuphupha ngengozi Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Iphupha malunga nokwenzakala
Ukulimala kunokuba kuncinci okanye kukhulu, emzimbeni okanye ngokweemvakalelo. Kungenxa yokuba kungekuphela kwezenzo, kodwa namazwi angashiya amanxeba, mhlawumbi ade athethwe ngentiyo.
Ngaphandle koko, yonke into el mundo unendlela eyahlukileyo yokujongana nokwenzakala. Yintoni ebangela ukuhlaselwa kancinci komntu omnye kunokuba ngumdlalo weqonga omkhulu komnye. Ukwenzakala ebusweni kunokushiya amanxeba kwaye kuhlale ixesha lokuphila; Olunye ukonzakala, okunje ngengozi enkulu yemoto okanye inxeba lokudutyulwa, kunokubangela ukukhubazeka ubomi bonke kunye nokukhubazeka. Indlela abantu abahlangabezana ngayo nale miphumo iyahluka ukusuka komnye umntu ukuya komnye.
Kodwa ayisiyiyo kuphela kwihlabathi lokuvuka elinokwenzakala, ukwenzakala okunjalo kunokubonakala nasemaphupheni. Ke oku kunokuthetha ntoni? Kubalulekile ukuphanda unobangela womonakalo wokulala. Ngaba ukhe wasikwa ngemela okanye wonzakaliswa yiras? Ubethwe lilitye elinzima? Ngaba yayiyingozi apho umntu wenzakala kakhulu? Okanye ngaba indlebe yayopha ngokukhawuleza?
Okanye mhlawumbi akukho mntu wenzakeleyo xa elele, ngakumbi njengesilwanyana. Ke oku kufuneka kuthathelwe ingqalelo ngakumbi xa kutolikwa amaphupha: yayisisiphi isilwanyana? Ngaba iye yanyangwa nogqirha wezilwanyana? Zonke iinkcukacha zephupha zibalulekile ekutolikweni ngokuchanekileyo!
1 Uphawu lwephupha «ukwenzakala» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukwenzakala» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukwenzakala» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukwenzakala» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, ukwenzakala kubhekisa kuwe njengomqondiso wephupha. Ukusilela okanye ukuthukwa kwamaphupha kwihlabathi lokuvuka. Ukungabikho kokusesikweni okwenzekileyo okanye ukugxothwa kothandekayo nako kungafihlwa emva kwako. Ukuphupha akukaqhubeki namava ukuza kuthi ga ngoku. Kungenxa yoko le nto babonakala kuye ephupheni bengamanxeba emzimbeni wakhe. Kuya kufuneka uzame ukujongana namava angathandekiyo kwaye uwamkele.
Okubangela umdla kutoliko jikelele lwesimboli yamaphupha "ukwenzakala" ikwangumntu osokola okanye obangela oko. Oku kunokubonelela ngemikhondo engakumbi kwilizwe labalindi.
Ukwenzakala ebuthongweni, okuthi, umzekelo, kubangele ukuqhwalela, kusenokubonisa ukuba ukuphupha ebomini bokuvuka kunempembelelo utshintsho inyanzelisiwe. Entlizweni yakhe akafuni lutshintsho, kodwa akanandlela yimbi.
Ukuba umphuphi unokwenzakala emzimbeni ephupheni lakhe, njengesihlakala sesandla okanye umntu okhubazekileyo, kufuneka alungiselele ilishwa kwihlabathi elivukayo ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha. Oku kuya kukucaphukisa kwaye kukukhathaze. Nabani na odutyulwe kumava abo ephupha kufuneka ajonge ukuba ngubani na lo ebejolise kuye: ukuba uyamazi ummelwane wokwenene ngasemva kwenyani, ubudlelwane kunye naye kwihlabathi elivukayo liyaphazamiseka.
Ukuba, ngokuchaseneyo, ukuphupha ubona ukwenzakala emzimbeni ephupheni lomnye umntu, oku kuyaqondwa njengesilumkiso. Amaphupha kufuneka alumke koomatshini kunye nabantu kwixa elizayo. Ukungaphumeleli ukwenza oku kunokukhokelela kwintlekele ngokukhawuleza.
Ukuba ukuphupha kulimaza omnye ngesithuko ephupheni lakho, lindela ukuba kwihlabathi lokuvuka uza kusebenza kakubi okanye uza kuziphindezela komnye umntu. Ukuba iphupha ngokwalo lifumana inxeba elithukayo ephupheni, oku kuyabonisa Iintshaba okanye izimbangi ebomini bokuvuka. Bafuna ukulawula kwaye boyise iphupha ngazo zonke iindlela.
Ukuba wenzakele ebuthongweni bakho ngelixa usilwa, kuya kufuneka uzame ukusombulula ukungqubana kwangaphakathi ngaphambi kokuba kukhokelele kwintlungu yeemvakalelo. Ukuba ukwenzakala kudlala indima ekulaleni kwimidlalo egqithileyo enje nge-bungee jumping okanye parkour, kunzima ukuba umntu oyise kwaye agqibe inqanaba lobomi. Ukuma kunokwenzeka ukuba kube noxinzelelo olukhulu kumntu ochaphazelekayo.
Umbono womthi ephupheni kunye ne-bark eyonzakeleyo unokubonisa ukuba uya kwenzakala ngokuvulwa kakhulu.
Ukuba ephupheni, i-calendula ointment isetyenziswe kwisilonda esikhumbeni, oku kungabonisa ixesha eliyimpumelelo. Ukuba umphuphi unokwenzakala ngokuwa xa elele kwizikhuselo zakhe, akasayi kufikelela kwinjongo ethile kwihlabathi lokuvuka ngokukhawuleza njengoko kulindelwe.
Uphawu lwephupha «ukwenzakala» - ukutolikwa kwengqondo
Ukonzakala njengophawu lwephupha kubonisa enye ngokokuchazwa kwengqondo ngephupha. iintlungu zengqondo. Iphupha liye labangela oku komnye umntu ebomini bokuvuka okanye wazifaka kuye.
Kwakhona, uphawu lwephupha kufuneka luqondwe njengophawu lotshintsho olunobundlobongela. Ukuba iphupha elo linenxeba ephupheni lakho, kuya kufuneka ulungelelanise notshintsho.
Ukuba, kwelinye icala, wenzakalisa umntu xa elele kwenye, ufuna enkulu ebomini bokuvuka. utshintsho amandla kubomi bomnye umntu. Nangona zikho iinjongo ezilungileyo emva kolu ngenelelo, iphupha lakhe licela umphuphi ukuba acingisise ngenyameko ngesenzo sakhe.
Ukuba wenzakalisa isilwanyana okanye umntu ngeharhu ephupheni, kufuneka ulumke malunga namandla akho okuqhuba kunye nokuziphatha kwakho ngokwesini njengoko oku kubonakala ngathi kushushu kakhulu kwaye kuyindlongondlongo.
Uphawu lwephupha «ukwenzakala» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha, isimboli yamaphupha "ukwenzakala" isetyenziswa njengophawu lokuqinisekileyo ganeko wadlala kubomi bephupha, okwakungathandeki kuye.